Ity tweak ity dia hahatonga ny Spotlight-tsika ilaina kokoa sy azo idirana | Vaovao IPhone
Ny iray amin'ireo zavatra ambany saina indrindra amin'ny iOS, fampiasana hendry, dia angamba ilay Spotlight. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra dia tsy ampiasaina na tsy ampiasaina firy izy io, zavatra tena mahamenatra, raha jerena ny mahasoa azy tamin'ny fanovana farany ny rafitra, ahafahana mitady zavatra fotsiny amin'ny alàlan'ny fikororohana ny efijery mankany ambaniny.
Searchlight dia tweak noforonina niaraka taminay ary Spotlight ao an-tsaina mba hanatsarana ny fifandraisana misy eo amin'izy roa. Amin'izany fomba izany dia hahita singa iray izay tsy isika ihany mora azo kokoa, izany koa ilaina kokoa.
Noho izany, ny fiasa fototra amin'ity tweak ity dia:
Afaka miditra isika avy amin'ny fampiharana rehetra: misaotra fihetsika izay hamaritana mialoha ny fisaorana an'i Activator, hahafahantsika miditra amin'ny Spotlight avy amin'ireo rindranasa misy antsika, fa tsy amin'ny efijery an-trano ihany.
Afaka mametraka isika Fampiharana tiana kokoa: amin'ity fomba ity, rehefa apetrakao ny Spotlight dia hanana fidirana mivantana amin'ireo rindranasa apetraka ho tianay ihany koa izahay, afaka miditra haingana kokoa amin'izy ireo.
Ny tweak dia manome antsika configurations vitsivitsy mba hahafahantsika mampifanaraka ny zavatra tiantsika ny fomba itiavantsika azy hampisehoana rehefa manokatra ny Spotlight sy inona no tiantsika hiseho. Isaky ny manao fanovana isika ary maniry ny hampiharana azy dia tsy maintsy manindry ny bokotra isika Mitahiry / mamelombelonaraha tsy izany dia tsy hisy vokany. Soa ihany, ity hetsika ity dia tsy mitondra antsika amin'ny famoahana indray ilay fitaovana.
Searchlight dia, raha fintinina, dia tweak tena ilaina ho an'ireo rehetra zatra nampiasa Spotlight ary te hampiasa azy io na dia mahomby kokoa aza. Afaka mahita izany amin'ny $ 1,99 isika amin'ny repo ofisialin'ny BigBoss amin'ny Cydia.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Cydia » Searchlight no tweak izay hahatonga ny Spotlight ho ilaina kokoa
Hevitra iray ho an'ny olona nostalgia: iPod Cover ho an'ny iPhone 6/6 Plus